IProPods Pro ezandleni zakho nge-190 euro | Ndisuka mac
IProPods Pro isezandleni zakho nge-euro ezingama-190
Ngaphandle kwamathandabuzo ezona ntloko zithandwa kakhulu yi-Apple ukuza kuthi ga ngoku zii-AirPods Pro, zombini nge-ergonomics yayo, ukusebenza kwayo, ukusetyenziswa kwayo, intuthuzelo kwaye ngoku kwiiveki ezimbalwa okanye kwiinyanga ezithile nokwehla kwexabiso. Kwaye kubonakala ngathi inkampani yaseCupertino icacile ukuba imodeli kufuneka ivuselelwe kwaye yile nto ithethwa ngamarhe, kodwa ngelixa oku kusenzeka abanye abasebenzisi abangenabo zinokwenziwa kunye nazo nge-190 euro.
Ngokunokwenzeka ayililo xabiso lisezantsi kwezi zi-headphone ze-Apple, kodwa ngoku kunjalo. Kwakhona, into elungileyo malunga nokuthenga kwiwebhusayithi yeAmazon yile isiqinisekiso siphelele Kwaye awuyi kuba nangxaki nangaluphi na uhlobo ukuba kuya kufuneka ubuyisele isixhobo okanye kwimiba yesiqinisekiso.
Thenga apha i-AirPods Pro nge-190 euro
Ezi ntloko zintengiso kukuthenga okuhle kakhulu ngoku nangona uninzi lunokucinga okanye luthethe kakhulu ngenguqulelo entsha eza kufika kwiinyanga ezizayo. Kwaye kunjalo Akukho mhla wasemthethweni waziwa ngokusungulwa kweprojekti entsha ye-AirPods Pro.
Ke ukuba ungomnye wabo bacinga ukuthenga ii-headphones ngorhoxiso lwengxolo, isandi esimangalisayo kwaye iyahambelana ngokupheleleyo nezixhobo ze-Apple, ngaphandle kwamathandabuzo i-AirPods Pro kufuneka ibe phezulu kuluhlu. Ezi ntlobo zonikezelo, njengoko nisazi nonke, zexesha elincinci kwaye amaxabiso ayahluka okanye ahluka ngokuxhomekeka xa ufunda eli nqaku, ngeli xesha ixabiso elisemthethweni liyi- $ 190 kwaye nangona sikubonile kungabizi kakhulu ngamanye amaxesha, yi ngokuqinisekileyo lixabiso elikhulu kwezi ntloko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » IProPods Pro isezandleni zakho nge-euro ezingama-190
Isici esitsha kwi-Apple Music: Izinto ezi-XNUMX eziphezulu zeVeki